Budata Vanishing Floor APK maka Android
Budata Vanishing Floor
Budata Vanishing Floor,
Ala na-apụ nanya bụ otu egwuregwu ikpo okwu kacha sie ike m gwugoro na ngwaọrụ gam akporo m. Na mmepụta, nke m na-eche ga-adọta ndị ọzọ ochie Player na ya retro visuals, nyiwe na-apụta na-apụ nanya na sekọnd.
Isi ihe na-eme egwuregwu ahụ, nke anyị na-agbalị iru ogologo oge o kwere mee nelu ikpo okwu na-apụta ma na-apụ nanya na ihe odide na-adọrọ mmasị, bụ nhazi nke ikpo okwu. Igwe ikpo okwu ị na-aga na-awụlikwa elu na-enwu dị ka ọkụ. Enwere m ike ịsị na ọ bụ egwuregwu ị na-enweghị ike ịga nihu mgbe ị naghị elekwasị anya na ihuenyo.
O zuru ezu imetụ isi ihe ọ bụla nke ihuenyo ahụ aka iji chịkwaa ihe odide na egwuregwu ebe anyị na-enwe ọganihu site nịwụ elu ogologo na mkpụmkpụ na-enweghị nkwụsị.
Vanishing Floor Ụdịdị